CONELE simenitra paompy kamiao - China Qingdao CONELE Group
CONELE simenitra paompy kamiao dia novokarin'ny Qingdao CONELE Group Co., Ltd., mampiasa traikefa nandroso tao an-trano sy any ivelany, ary ankehitriny solosaina simulation mandroso ny teknolojia ho amin'ny fomba handinika ny adin-tsaina sy famindràn-toerana ny paompy firafitry fiara. Ny herin'ny isan-karazany maromaro toy ny voajanahary matetika ny harerahana fiainan'ny Boom Misy fanazavana momba. Mandritra izany fotoana izany, ny hydraulic rafitra dia optimisé sy ny teknolojia vaovao ranon maimaim-poana dia natsangana mba indrindra mampihena ny fiantraikan'ny paompy commutation ny boom. Manana Patents maro ao amin'ny Optimization ny Boom rafitra sy ny famolavolana ny hydraulic rafitra.
Ny tonga lafatra vokatra tsara fanaraha-maso, ny tanterak'i vokatra fanamboarana, ny tena nitandrina tsara fisafoana mahatonga ny CONELE paompy fiara ho tonga ny an-toerana fitarihana, ny iraisam-pirenena mandroso lenta, ny sandriny rafitra rehetra mandany vy takelaka sy avo hery hatsiaka nanakodia vy lovia, làlana hery ambony 1000Mpa miantoka avo hery sy fahazavana lanjan'ny boom rafitra. 100% ny sandry, tongotra sy ny fiara mifono vy no welded solika ho an'ny adin-tsaina fitsaboana. Weld tsirairay ny rafitra Boom dia pitsapana 100% tsy misy simba na X-ray sary mba hanafoanana ny kilema misy miafina amin'ny an-tsipiriany ary ataovy mateza kokoa. Isika mamaritra ny daty marina amin'ny alalan'ny tariby singa fanadihadiana sy famakafakana simulation mavitrika mba hahazoana antoka ny antonony tsara rafitra sy ny fampisehoana ny boom rafitra. Ary ny kajy sy ny vokatry ny fanadihadiana jib no voamarina firafitry ny fanjakana-anivon'ny foibe fanaovana fitiliana ho an'ny adin-tsaina-aretina fitsapana mba hanaporofoana vokatra tena mifanaraka amin'ny fepetra asa.
CONELE Group foana nisisika amin'ny mpanjifa-mirona, amin'ny taona maro ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famokarana traikefa ny paompy fiara, araka ny mpanjifa fepetra, natao ny entana toy ny mpanjifa 'fangatahana, isika miezaka foana mba hanome anao ny tena sahaza ho an'ny fanorenana zavatra ilaina ny paompy fiara, mba mpanjifa "ihany no mifidy ny marina iray, tsy misy mila ny lafo vidy".
Post fotoana: Feb-17-2020